Nestle NaturNes Bio Basic 90G 6M + - ASFO Chitoro
NaturNes Bio Manga inzira inoshanda yekuunza chibereko chemwana wako kwese kwese. Yakagadzirirwa vacheche kubva pamwedzi mitanhatu uye mune yakasarudzika fomati 6g, ine michero yeakazvarwa mavambo, akakura uye akasarudzika kunyanya kudyiswa kwevacheche.
NaturNes Bio Manga isarudzo huru yekutanga kuunzwa kwemichero pakudyisa kwevacheche uye fomati yepaketi inokutendera kuti uende nayo kwese kwese. Iko kurongedza kwakagadzirirwa zvakanyanya kukurudzira vacheche vakura kuti vadzidze kudya michero voga kubva mupaketi. Yakagadzirwa neye organic michero giredhi, yakakura uye yakasarudzika yakasarudzika yekudyisa kwevacheche uye isina mavara ekugadzira kana zvinodzivirira *.
Iyo packet NaturNes Bio Manga inzira yakaenzana uye inoshanda yekuendesa zvakanakira michero kumwana wako, chero nguva chero kupi. Iine 100% michero isina kuwedzerwa shuga, iine chete mashuga anowanzoitika. Muhomwe yega yega NaturNes Bio ndiyo yakaenzana neicho chinoshumirwa chemichero, ichipa iko kwakanyorovera uye dhizaini inonaka yekugutsa marati anonzwisisa zvakanyanya!
Nekuzvipira kupa zvinongedzo zvekwakaberekwa mavambo, akagadzirirwa michero Biological Mucheche NaturNes Bio Basic, yakagadzirwa nemango puree, 100% kwayakabva.